Night Vision Camera app ကိုသတိထားပါ။ | Androidsis
Android Alert!: Night Vision Camera app ကိုသတိထားပါ
Francisco Ruiz | | Android application များ, လုံခွုံရေး
လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်ကမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုမင်းကိုအသိပေးခဲ့တယ် Kaspersky de TOR ကွန်ယက်ကိုသုံးမည့် Trojan အသစ်တစ်ခု အသုံးပြုသူမပါဘဲနှင့်သတိပြုမိခြင်းမရှိဘဲသူတို့လုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့အမှားမဆိုသဲလွန်စမချန်ဘဲ။
ယခုဤအခါသမယအသစ်နှင့် အဖြစ်ကောင်းစွာငါတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်ညွှန်ပြ de ကဗျာ, Chema Alonsoတစ် ဦး လူသိများနှင့်ထင်ရှားတဲ့ ဟက်ကာ အသုံးချပရိုဂရမ်ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ် Night Vision ကင်မရာ သောယနေ့နေဆဲရရှိနိုင်ပါသည် Play စတိုး မည်သည့် Android သုံးစွဲသူကိုဒေါင်းလုပ်ချတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်
အထက်ဖော်ပြပါနှင့်လူသိများသောဟက်ကာ Chema Alonso သူသည်လျှောက်လွှာ၏ apk ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာပြီး၎င်းကိုလူတိုင်းကိုသူ့ဘလော့ဂ်တွင်ရရှိစေရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ယူဆနေကြသည်ကုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းများ သူတို့ app ကိုခွင့်ပြုမယ်လို့ SMS ကိုလက်ခံရယူပါ အသုံးပြုသူသည်သူသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများဟုခေါ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့စာရင်းပေးသွင်းထားကြောင်းကိုသူမသိသောကြောင့်ကြားဖြတ်ယူခြင်းများပြုလုပ်သည် ပရီမီယံ SMS သူတို့ကသင့်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့စာအသစ်လက်ခံရရှိမှုတိုင်းကိုမတန်တဆပမာဏပေးတယ်။
လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သောပုံတွင်သင်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကရသေး တရားဝင် Android app စတိုးတွင် လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွက်မျှော်လင့် ဂူဂဲလ်သည်ဤစွပ်စွဲထားသောအန္တရာယ်ရှိသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအရေးယူသည်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသူမည်သူမဆိုကိုမကူးရန်၊ တိုက်ထုတ်ရန်နှင့်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းငွေတောင်းခံမှုကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သို့မှသာလကုန်၌မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Android Alert!: Android အတွက်ပထမဆုံး TOR Trojan ပါ
ရင်းမြစ် - ကဗျာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Android Alert!: Night Vision Camera app ကိုသတိထားပါ
@ 202A (@ 202A) ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်လျှောက်လွှာ (သို့) ကုမ္ပဏီကိုတီထွင်သည့်ကုမ္ပဏီကိုဆန့်ကျင်။ မကောင်းသောလူသိရှင်ကြားလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ကြောင်းသင်မည်သို့သိသနည်း။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကိရိယာကိုဒီစွမ်းဆောင်ရည်တွေပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်ကင်မရာ၏ viewfinder ကိုသာအရောင်တင်သော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုနေရာမှအန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်ပါသည့်ဘောလုံးသည်ရေမှုတ်ရေကျသွားသည်။
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်စတိုးတွင်သူတို့စတိုးဆိုင်၌တင်ထားသောအပလီကေးရှင်းများကိုဆန်းစစ်ရန်မနှေးကွေးပါ။ အရင်းအမြစ်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများလုံလောက်သည်။
@ 202A (@ 202A) ကိုတုံ့ပြန်ပါ
သင်ဘာကြောင့်တပ်ဆင်။ မရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိရန်နှင့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုပြောပြရန်၎င်းကို Play Store တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
Juan Garcia က ဟုသူကပြောသည်
Francisco ကဘာလဲ ...
Elvis tek ဟုသူကပြောသည်
Elvis Tek မှစာပြန်ရန်
မည်သည့် smart device ကိုမဆိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် gadget ကိုမြည်ပါ
Webogram, Chrome ကိုဖွင့်လှစ်ရန် Telegram ၏ဗားရှင်း